> Resource> iPod> otú na-ekiri ihe nkiri na iPod aka
Ebudatara nkiri na ụfọdụ weebụsaịtị, ma ugbu a chọrọ igwu ha na iPod aka? N'ụzọ dị mwute, ihe nkiri na-apụghị-egwuri ruru ka kedi formats? Echegbula. Ebe a bụ ezi ihe ngwọta. Dị nnọọ anya ebe a: Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ma nsụgharị nke a usoro-enye gị ike ịgbakwunye na tọghata fim na kọmputa na-iPod aka na-enweghị a ikedo. Mgbe ahụ, ị na-ekiri ihe nkiri na iPod emetụ gị n'obi si ọdịnaya.
Download usoro ihe omume na-agbalị-ekiri ihe nkiri na iPod aka.
Cheta na: The Windows version - Wondershare TunesGo akwado converting ma na-ekiri ihe nkiri na iPod aka 3/4/5 na-agba ọsọ iOS 5 / iOS 6 / iOS 7 / iOS 8 / iOS 9. The Mac version-enyere gị aka na-ekiri vidio na iPod aka 5 / 4 na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 & iOS 9.
Olee ekiri ihe nkiri na iPod aka
Ma nsụgharị na-arụ ọrụ nke ọma. Na akụkụ a, ga-amasị m na-agwa gị otú na-ekiri fim na gị iPod aka na Windows version.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na-agba ọsọ TunesGo
Ugbu a, wụnye TunesGo na-agba ya na PC. Jikọọ iPod aka ka PC site na eriri USB na-abịa iPod aka. Mgbe ghọtara, gị iPod aka na-egosipụta na isi window.
Nzọụkwụ 2. Watch vidiyo na iPod aka
Na-ekpe sidebar, pịa "Media". Ugbu a, ị ga-ahụ ụfọdụ na taabụ na n'elu akara, ya bụ, Music, Movies, Pọdkastị, TV na-egosi, iTunes U, Music Videos, audiobook. Ebe a anyị na-fim dị ka ihe atụ. Pịa "Movies" na-egosi ihe nkiri ahụ window.
Tupu ya etinye ebudatara nkiri na gị iPod aka, na-ahapụ 'setịpụrụ video akakabarede mma. Na elu nri akuku, pịa 2nd icon na-egosi esiri-ala menu. Họrọ "Setting"> "Video Nchigharị". Họrọ ọkacha mmasị gị àgwà ụdị. Mgbe ahụ, pịa "OK" mezue ọnọdụ.
Mgbe ahụ, na-abịa azụ ka nkiri window. Pịa triangle n'okpuru "Tinye". Ma họrọ "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa". Agagharị gị na kọmputa na-ahụ fim ma ọ bụ ihe nkiri nchekwa. Mgbe ahụ, pịa "Open" ịgbakwunye ha. Mgbe a dee Pop elu, na-agwa gị na kwukwara na fim na-adịghị iPod emetụ enyi na enyi formats, ị nwere ike pịa "Ee" iji tọghata nkiri na MP4.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado tọghata 3GP, MP4, mpg, MPEG, DAT, MOV, AVI, FLV, wdg Biko ego ọzọ na-akwado videos formats ebe a.
Mgbe ahụ, a usoro amalite iji tọghata fim. Mgbe akakabarede, fim a ga-azọpụta na gị iPod aka. Cheta na-gị iPod aka ejikọrọ iso akakabarede mechie.
Ugbu a, ihe nkiri bụ na gị na iPod aka. Enweta "Videos" na gị na iPod aka. Chọta nkiri ị na-amasị na-ekiri. Mgbe ahụ, na-enwe ihe nkiri ji obi ụtọ.
Gbalịa TunesGo mara otú na-ekiri vidiyo na iPod aka.